nidaamka korontada saldhigga Telecom - Shiinaha Renergy Qalabka Co., Ltd
garoonka variable RW-5KW
RW-10KW garoonka variable
RW-20KW garoonka variable
RW-30KW garoonka variable
LED iftiinka jidka qoraxda
LED iftiinka qoraxda muuqaalka
LED iftiinka qoraxda Lawn
LED iftiin Tunnel
Hogaaminayo Grow light
Wind hybrid qoraxda iftiinka jidka
5kw on-Roobka nidaamka qoraxda
5kw off-Roobka nidaamka qoraxda
10kw on-Roobka nidaamka qoraxda
10kw off-Roobka nidaamka qoraxda
Telecom nidaamka korontada station
nidaamka Roobka Micro
Off-Roobka korontada dabaysha
Off-Roobka qoraxda, dabaysha iyo naaftada
Telecom korontada station
qoraxda Wind iyo hybrid Roobka
marawaxadaha dabaysha Small yihiin xalka ugu fiican ee waaxda isgaadhsiinta ee.
saldhigyada Telecom waxaa la geeyay tiro badan oo adduunka ah si loo hubiyo in kaabayaasha a isgaarsiinta ku filan. In badan oo meesha fog, shuruudaha awooda ee saldhigyada, kuwaas oo waxaa inta badan la siiyaa via matoorrada naaftada deegaanka aan habboonayn, oo aan qaali ah oo kaliya in ay ku shaqeeyaan, laakiin sidoo kale u kordha sii of sahayda shidaalka, isticmaalka matoorrada naaftada dhakhsaha badan noqon doonaa karin.
marawaxadaha dabaysha Renergy shuruudaha adeegga iyo dayactirka hooseeyo dhigi rakibo ee fog iyo adag tahay in adeegga goobaha more soo jiidasho leh.
Codsiga: Si loo siiyo il lagu kalsoonaan karo, kharash-ool ah iyo deegaanka codka awood xarun isgaarsiinta mobile Shiinaha ee degaanka fog.
Laga soo bilaabo sanadkii 2008, Renergy ayaa ka qayb-galay design ee il awood la isku halayn karo ee saldhigyada isgaarsiinta ee degaanka miyiga for mobile Shiinaha. Inta badan goobaha cusub ama goobaha updated la dhisay on buuraha, iyo kuraha, waxay ahayd lagama maarmaan in network dhismaha iyo dayactirka loo qaadan karaa waqti kasta oo sannadka ah iyadoo la yaraynayo booqasho goobta
qalabka ugu muhiimsan ee nidaamka korontada waa marawaxadaha Renergy Wind. Waxa loo isticmaalaa sida element ugu weyn ee nidaamka awood fog ee degaanka miyiga. Sida oo kale, marawaxadaha this ayaa laftiisa xaqiijiyay in ka badan dhowr sano ee dhinacada aad u daran ee cimilada jira kara ee waqooyi-galbeed iyo koonfur-galbeed ee dalka Shiinaha. meesha Waqooyi Galbeed waa meel dabaysha; inta badan beeraha dabayl MW waxaa halkaas ku yaalla. gusts aad u xoog badan oo dabayl ah ku dhici karaa wakhti kasta oo sannadka ah, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha, iyo this waa ka sii xumaataa ay sabab u tahay sare oo dheeraad ah oo qaawan meelaha sare halkaas oo saldhig isgaarsiinta ahaayeen in la dhisay. Waxay ahayd lagama maarmaan ah in qalab kasta oo lagu rakibay meelo kuwaas oo ahaa waara oo lagu kalsoonaan karo halka u baahan dayactirka ugu yar.
Nidaamka ayaa u soo shaqeynayay tan 2009 iyo nidaamka awood u goobaha rakibo wuu oofiyey aad u fiican. Renergy rakibay boqolaal nidaamka sida for mobile Shiinaha. Iyo in ka dib, Renergy bilaabay si ay u bixiyaan nidaamka sida for Shiinaha Midowga, Shiinaha Telecom.
Ilaa hadda, Renergy ayaa la siiyaa boqolaal nidaamka sida macaamiisha shirkadda isgaarsiinta ee Russia, Tajikistan iyo Iran.
marawaxadaha dabaysha iyo guddi qoraxda korontada, ka qaadaan galay group batari DC48 iyada oo dabayl 48V iyo xakamaysada hybrid qoraxda, awood siin waayo xamuulka isgaarsiinta.
matoor Diesel loo isticmaali karaa sida korontada gurmad. System ilaa xad in ay ku siin karaan awood AC iyada oo ah inverter Roobka off, iyo sidoo kale laga heli karaa in ay ku xidhmaan Roobka iyada oo ku inverter Roobka.
garoonka variable RW-5kW, DC200V
Tower iyo accessories
8m, munaaraddii monopole
guddi Solar iyo qaybta
Battery iyo qaybta
1. xiriir guddiga qoraxda Multiple
2. xidhiidha marawaxadaha dabaysha Multiple
3. Diesel matoor sidii gurmad
4. function MPPT Solar
5. Wind function MPPT marawaxadaha
6. awood Solar gacanta danab saarka
7. Wind gacanta danab saarka awoodda
nidaamka maamulka tamarta 8. batari Digital
9. nidaamka maamulka load Intelligent
10. System ogaado qalad iyo nidaam la socodka
nidaamka kala iibsiga 11. Wireless
12. Wind maamulka marawaxadaha orodka.
Idaacadda Telecom, saldhigga signal, saldhiga GSM iyo wixii la mid ah.
Daraasad dhacdo Codsiga
Telecom waxbarasho kiiska saldhigga
waqti Post: Apr-19-2018